I-Semalt: Ukuthuthukiswa kwe-WordPress Plugin
i-WordPress CMS ine-global coverage yokusebenzisa amawebhusayithi ahlukene. I-WordPress inikeza i-startups kanye ne-blogger isiteji esinokwethenjelwa sokusetha nokusingatha amasayithi abo. Zinezindlela ezinamandla kanye nendlela yokwenza isofthiwe esemthethweni yokwenza imisebenzi yabo. I-WordPress, abasebenzisi bangakha amawebhusayithi futhi benze ngezihloko zabo ngezifiso ngezindlela ezihlukahlukene. Ku-SEO, enye yezindlela ezibaluleke kakhulu zokuthuthukisa ukusebenza noma isihloko sakho kungama-plugin.
Ama-plugin amancane amafrikhthi wefayela le-PHP aqukethe izici zekhodi eziguqula izici zakho zetimu. Kulesi siqondiso se-SEO, sizobhekana nezici ezihlukahlukene zokuthuthukiswa kwe-plugin. Uzokwazi ukuthi isidingo sama-plugin kanye nokuthi yiziphi ama-plugin okwakhayo. Noma ubani angakha i-plugin ye-WordPress ngolwazi oluyisisekelo lwe-PHP. Kuhilela ulwazi lwefayili yefayela le-WordPress kanye nephaneli layo lokuphatha.
U-Andrew Dyhan, isazi esihamba phambili se Semalt , unikeza lapha ezinye zezindaba ezicindezelayo ngalokhu.
Izizathu zabantu ukuthuthukisa ama-plugin
Ama-Plugin akhulisa indlela izindikimba zethu ezisebenza ngayo. Ungakwazi ukwengeza ngokushesha isici esengeziwe esihlokweni sakho ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwama-plugin. Ama-plugin aqukethe amakhodi enza imisebenzi ngaphandle kokushintsha ikhodi eyinhloko yewebhusayithi yakho. Lawa mafayili e-PHP afakwa kwisakhiwo sefayili se-WordPress. Lolu shintsho lunamathuba amaningi kubantu abangadinga ukwethula izici ezintsha kuwebhusayithi yabo.
Njenge-CMS ethandwayo, i-WordPress inezici eziningi ezithuthukile ezenza ama-plugin amaningi atholakale noma asondele. Njengomthuthukisi wewebhusayithi, kunesidingo sokuba nezimo eziguquguqukayo ekulawuleni kwakho kokugcina. Futhi, abathuthukisi be-PHP bakhokha imali eningi ukwenza imisebenzi elula njengokuthuthukiswa kwe-plugin. Ungafunda indlela yokuthuthukisa i-plugin ye-WordPress bese ugcina inzuzo. Ngaphezu kwalokho, i-API kulula ukuyisebenzisa futhi ufunde.
Ukwaziswa ngamawijethi we-sidebar, kanye nezinye izici ze-WordPress, kubalulekile kumthuthukisi..Kulula ukwazi ukuthi amasistimu asebenza kanjani ukuze kube lula ukuxilongwa kwezinkinga.
Ukudala i-plugin ye-WordPress
Ama-plugin we-WordPress amafayela ahlanzekile we-PHP. Ukuze udale eyodwa, udinga ukwakha ifolda yayo kumhlahlandlela we-plugin bese ufaka ifayela le-PHP elingenalutho. Igama lefolda kufanele lifane negama lefayela. Lokhu kufanele kusebenze isihloko sakho kwifayela lemisebenzi.php. Izinguquko zingase zilahleke uma ushintsha isihloko.
Kusuka lapha, udinga ukukhetha unhlokweni wetimu. Inhloko iqukethe ulwazi olukhethekile mayelana ne-plugin yakho. Lolu lwazi lungabandakanya igama, incazelo, umbhali noma inguqulo. Ngaphansi kwesibonelo sekhanda eliphelele;
: I-Plugin yakho
I-plugin ye-URI: https://www.yourpluginurl.com/
Inguqulo: Inguqulo yamanje
Umbhali: Igama sicela
Incazelo: Iyini i-plugin yakho
Lona i-plugin ephelele ongayivimba noma yokuvala ephasini lomqondisi. Nokho, le plugin ayikwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi. Ungadinga ukungeza ikhodi nemisebenzi eminingi ukuze wenze imisebenzi oyidingayo. Isibonelo, ungenza ukwenza umsebenzi ngokungeza umsebenzi:
add_action ('save_post', 'wazise');
Uma uqedela i-plugin, khumbula ukuyilayisha nokuyifaka. Lena yindlela kuphela kuphela izinguquko ezingasebenza.